Maleeshiyaatka Dowlada Federaalka Oo Muqdisho Ku Dagaalamay. – Calamada.com
Maleeshiyaatka Dowlada Federaalka Oo Muqdisho Ku Dagaalamay.
calamada July 12, 2016 1 min read
Saacadihii lasoo dhaafay waxaa gudaha degmada Dharkenley ee magaalada Muqdisho ka dhacay iska hor’imaad sababay khasaaraha nafeet oo dhex maray maleshiyaat ka wada tirsan dowlada Ridada federaalka.
Iska hor’imaadka waxa uu sigaar ah kaga dhacay xaafada Saliga Americanka ee degmada Dharkenley’iyadoona iska hor’imaadka uu yimid kadib markii saraakiisha horkaceysa maleeshiyaatkaasi ay ku murmeen guri ku yaala gudaha degmadaasi.
Iska hor’imaadka ayaa sababay khasaara nafeet oo soo wada gaartay maleeshiyaatka Murtadiinta dagaalamay iyo qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan xaafada Saliga American-ka.
Marka laga hadlayo khasaaraha soo gaartay dadka shacabka dhimashada waa 3 ruux iyo dhaawaca labo kale’iyadoona khasaaraha maleeshiyaatka Murtadiinta gacmahooda isugu geysteen intaasi uu ka badan yahay.
Magaalada Muqdisho waxaa si xiriir ah kaga dhaca iska hor’imaadyada inta badan dhex mara maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka’iyadoona iska hor’imaadyadooda uu yimaada markasta oo ay ku murmaan qaadka iyo lacagaha sida baada ah dadka shacabka kaga qaataan.
Previous: Dhageyso Warka Subax Ee Andalus 07-10-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Shacabka Marka Oo Ku Farxay Lawareegida Mujaahidiinta Ee Magaaladaasi.